Fanazavana efatra mety ho marina mahakasika ny fangalampiery ataon’ny filoha Torkemenistana · Global Voices teny Malagasy
Manaraka akaiky ny momba an'i Berdymuhammedov ireo lohandohan'ny mpisorona. Nahoana?
Voadika ny 20 Janoary 2020 13:14 GMT
Sary iray an'ilay filoha Tiokmenistana Gurbanguly Berdimuhamedow, tany ivelan'ilay kianja iraisam-pirenena fihazakazahan-tsoavaly tao Ashgabat, Turkmenistana. Sary nalain'i Bjørn Christian Tørrissen (CC BY-SA 4.0)
(Lahatsoratra nivoaka ny volana Aogositra 2019 )
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay, nampiahiahy ny tsy fahitàna ny filoham-pirenena Tiorkmena, Gurbanguly Berdymuhammedov, tany amin'ny haino aman-jery sy ny fiainana politika tao amin'ny firenena. Notaterina fa niverimberina matetika tany aminà hopitaly Alemàna iray izy nikarakara ny reniny marary, namoy ny ainy noho ny tsy fahatomombanan'ny voa, avy eo dia niresaka an-telefaonina tamin'ny filoham-pirenena Ozbek.
Na inona na inona zavatra iainan'i Berdymuhammedov, izay no zava-misy, mifanohitra amin'ny fomba fanaony mahazatra , tsy nisy fisehoana imasom-bahoaka nataony mihitsy.
Nahatonga an'i Tiorkmeniana ho eo anoloan'ny jiron'ireo filazambaovao lehibe erantany sy ireo mpandinika ny hoavin'ilay filoha iny toejavatra iny. Nisy hafatra Telegram niparitaka tanaty Twitter ny 21 Jolay nilaza fa namoy ny ainy noho ny tsy fahombiazan'ny voa ilay filoha. Nandiso izany tsaho izany moa ny avy ao amin'ny fiadidian'ny repoblika ary nanambara ny 25 Jolay fa vao avy niresaka an-telefaona tamin'ny filoha Ozbek i Berdymuhammedov. Ary tsy hita sy re intsony indray izy taorian'izay.
Lahatsary mampiseho ilay filoha mitondra fiara ary izy miresaka momba ny zava-bita ara-toekaren'ny firenena no nivoaka ny 3 sy 5 Aogositra, kanefa noheverin'ireo mpandinika sasany ho tsy azo antoka ilay sary.
Tamin'ny volana Jolay, tena fanalana andro ho an'ireo mpilaza vaovao sy mpandinika ny toe-draharaha politika mihitsy ny fanaovana ankamantatra momba izay toerana misy ny filoha. Vitsy no sahy manao tombatombana, kanefa maro tamin'ireo mpandinika ny teo-draharaha no nahatsapa fa misy zavatra hafahafa. Vao mainka moa nahasarika ny sain'ny maro ilay raharaha tamin'ny fahavitsian'ny vaovao (vakio: fahabangana virtoaly) mivoaka omen'ny filazambaovao nasionaly tsy miankina. Somary taraiky i Tiorkmenistana raha resaka fidirana anaty aterneto ary vitsy ny vaovao mivoaka tsy avy amin'ny vaovao ofisialy ankoatran'ny avy amin'ny filazambaovaom-panjakana.
Amin'ny teny hafa, amin'izao sehatra misy izao, izay zava-misy any Ashgabat dia mijanona ao Ashgabat ihany.
Nitondra an'i Tiorkmenistana nanomboka ny taona 2007 i Berdymuhammedov, rehefa nofidiana hanolo ilay filoha voalohany, Saparmurat Niyazov izy. Namoy ny ainy ny 21 Desambra 2006 i Niyazov noho ny fijanonan'ny fony tampoka, nametraka io toerana io ho banga, ary feno taorian'ny fifidianana izay nahabe resaka tanteraka. Tamin'ireo mpifidy 95 % izay nandatsa-bato, 89.23% no nanohana an'i Berdymuhammedov (araky ny vinavina ihany). Voafidy fanindroany ny taona 2012, ny taona 2016, nofoanany ny fetram-potoana hitondran'ny filoham-pirenena, izay namoha indrindra indrindra ny fahafahany hijanona ho filoha mandra-maty.
Fa maninona ireo manampahefana ao an-toerana no tsy afaka milaza fotsiny amin'ny rehetra hoe aiza ny filoha? Misy fanazavana maro mifandraika amin'ireo vinavina efatra azo heverina ho marina :
Vinavina 1 : Velona any i Berdymuhammedov ary mandàka. Mety miala sasatra izy, kanefa, raha ny fitiavany ny fisehosehoana amin'ny filazambaovao hatry ny ela, dia mahagaga ny olona ny tsy fahitàna na dia sariny iray aza mamily sambo eny amin'ny ranomasina Pasifika, na, mitolona omby amin'ny tànam-polo any Espaina. Ny hany azo heverina izao dia ny hoe any amin'ny toerana miafina no misy azy, manomana tetika maty paika mikasika ny hoavin'ny firenena. Midika indrindra izany fa hanao fanadiovana eo amin'ireo lohandohan'ny mpisorona ao Tiorkemenistana izy, hanilihana ireo izay nampiseho fankahalàna tafahoatra na tsy fahampiana fiarahamiasa taminà olana saropady sasany. kanefa afaka vitaina anaty andro iray na roa ny asa tahaka izany. Fa maninona no tsy hita ela be ohatra izao ?
Vinaviana 2 : Aretina. Araky ny vaovao ofisialy nivoaka, marary ny renin'i Berdymuhammedov. Hafiriana anefa ny filoha no afaka hijanona hikarakara an-dreniny, ka hamela ireo raharaham-pirenena maika rehetra tsy hisy fanarahamaso ? Sa ve misy mpiaramiasa aminy tena itokisany fatratra ka nametrahany ny andraikitra rehetra hitondra ny sambo? Mety nampiasaina ho an'ny filoha sy ny reniny izany ilay fiaramanidina hita tany Alemaina, fa tsy araky izay nambara. Mety tsy ny filoha no nitondra ny reniny araka izany, fa ny reniny no nitondra ny filoha ho any amin'ny hopitaly.
Nefa, rehefa tonga tany amin'ny hopitaly dia inona no nitranga ?
Vinavina 3 : Tsy dia tsara loatra ny manoratra momba ny fahafatesan'ny olona iray raha mbola tsy amin'ny fotoanany, kanefa tsy azo hodian-tsy hita ny zava-misy hoe tsy manana filoham-pirenena i Tiorkmenistana amin'izao fotoana izao. fa maninona no mbola tsy nisy nipika ihany ? Satria ny “fitoniana” no tena voizin'ireo mpitarika taorian'ny vaninandro sovietika ireo, zavatra roa raha kely indrindra no iankinan'izany
Voalohany, ny tsy fahavitan'ireo mpitarika ireo mizara ny mavesatra amin'ny mponina. Zava-dehibe amin'izy ireo ny seho ivelany, ary tsy asiany vidiny na tsy misy dikany aminy ny andraikitra manoloana ny vahoaka ao Tiokmenistana, fomba iray hiatrehana ny fahafatesan'ilay filoha ny fisorohana ny vesatry ny tsy fitoniana tsy hihatra amin'ny vahoaka ny fanambaràna amin'izy ireo ny fahafatesan'ilay filoha no sady manolotra izay filoha vaovao, anaty fotoana izay mitovy.
Faharoa, ny tahotra ny ho voalefona ivoho no malaza amin'ireo mponina ao Tiorkmenistàna ary indrindra moa fe eny anivon'ireo mpitarika. Raha mpikambana ao amin'ny governemanta ianao ka manao izay ahazoana tombony be amin'ny fitsinjaràna andraikitra taorian'i Berdymuhammedov sy ny fizaràna fahefana, inona no tombontsoa ho azonao amin'ny fanaovana sotrobe lava tango?
Vinavina 4 : Nesorina tsy ho eo amin'ny toerany intsony ny filoha, araky ny fomba fanao Boris Yeltsin, ary mbola mandamina ny tokony ho atao ireo lohandohan'ny mpisorona. Manomboka jerena akaiky ny fifamatoran'andraikitra ary ho fitsinjovana ny tombotsoan'ny maro an'isa sy hisian'izany dia mba ho kely na tsy misy mihitsy aza ny hevitra avy any ivelany. Azo ampiharina eo ihany ny anton'ilay vinavina faha 3 araka izany : raha jerena ny dindon'i Berdimuhammedow tany aloha, sy ny fahafahany mandamina ireo lohandohan'ny mpisorona, tsy dia mitombina ihany ity vinavina ity, raha tsy hoe angaha very tampoka teo ny fahaizan'ny filoha misarika sy ny fahefany, izany no matetika mitranga rehefa misy aretina mafy mamely.
“Sarotra ny vinavina, indrindra fa momba ny hoavy” , hoy ny fampitandreman'ilay Danoà fizisiana Niels Bohr taminay. Kanefa tsy misy vinavina azo tsapatsapaina eto. Fa resaka faminavinàna ny ataon'ilay filoha ihany no atao. Raha tsy velona intsony izy, tsy maintsy efa nanomboka teny anivon'ireo lohandohan'ny mpisorona ny fandaminana ny zavatra rehetra ary tsy maintsy ho fantatsika eo ihany ny fizotran'izany—na mety efa fantatsika ihany amin'ny fotoana ivoahan'ito lahatsoratra ito.
Mety hoe sy fantatsika ny toerana misy ny politika Tiorkmena amin'izao fotoana izao satria na ireo lohandohany ao amin'ny aza tsy mahalala akory ary tsy afaka ny handray fanapahankevitra—farafaharatsiny mandra-paha tsaratsara ny fahasalaman'ilay filoha na mandra-paharatsy izany tanteraka. Eo am-piandrasana izany, voahozona hiandry ny fipotsahan'ny vaovao ofisialy avy amin'ireo manampahefana isika.